"Ary raha mijaly ny anankiray amin’ny momba ny tena, dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena ; fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin’ny momba ny tena, dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy." 1 Korintiana 12:26-27
"Ary Izy (Kristy) no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana." Kolosiana 1:18
Nisavilivily teo ambony sezany tao an-dakilasy i Kanto. Mipetraka ao aorianany i Tendry, manatsotra ny tongony. Tampotampoka teo, dia voahitsaky ny sezan’i Kanto ny tongotr’i Tendry. Nikiaka mafy izy hoe: “Ay, marary izany!” Tsy niteny i Tendry hoe: “Nataonao marary ny tongotro”. Na dia ny tongotr’i Tendry aza no voa, dia izy mihitsy no marary. Na ny tongotr’i Tendry, na ny ranjony, na ny tanany, dia izy ihany! Izao koa no fiteny: “May aho, maratra aho…”. Na dia ny rantsantanana aza no voakasika, dia izaho no manaintaina!
Ny vatan-tenan’ny olona tokoa mantsy dia iray tsy mivaky, mifamatotra aman’aina amin’ny loha. Raha maratra ny tongotro, dia ny atidohako no mahatsapa ny fanaintainana, ka ny tena manontolo no marary. Mifamatotra akaiky ny vatana sy ny loha, ary tsy misy ny iray raha tsy eo ny iray.
Misy lesona lehibe ho an’ny fiainana kristiana izany. Ny Baiboly mantsy dia mampianatra fa ny kristiana rehetra no mitambatra mba ho tenan’i Kristy, ary Izy no Lohan’io tena io. Ny kristiana tsirairay dia mifamatotra aman’aina amin’i Jesosy Kristy, ary iray aina aminy. Tsy misy afaka manapaka izany fifamatorana izany, fa voarafitra ho mandrakizay izany. Koa izay mahakasika ny kristiana dia mahakasika mivantana an’i Jesosy mihitsy koa!
Tsy mampahery antsika tsirairay ve izany? Rehefa mandalo zava-tsarotra eo amin’ny fiainana isika, dia miara-mijaly amintsika koa Jesosy.
Mampirisika antsika koa izany, hihevitra sy hikarakara ny rahalahy sy anabavy rehetra ao amin’ny finoana. Izy ireny mantsy dia Jesosy ihany!